MUJAHID: CALI GURAY’ FARTU DIIDDAYE MA FULLAA DHAQAY | Maalmahanews
MUJAHID: CALI GURAY’ FARTU DIIDDAYE MA FULLAA DHAQAY
October 6, 2017 - Written by admin
Hargaisa:(Maalimahanews) Mujaahid Cali yuusuf Cali guray oo ka mida siyaasiyiinta waawayn ee xusbiga kulmiye ayaa qoraal uu ku daabacay barta xidhiidhka bulshad ee facebook uu ku leeyahay ayuu kaga faalooday arimo la xidhiidha doorashada iyo cabsida xusbiga mucaaridka ah ee waddani ay ka qabaan natiijada doorashada waxaanu ku bilaabay qoraalkiisa sidan:
Waxa la yaab leh in goob kasta ay masuuliyiinta xisbiga WADDANI la taagan yihiin “Kulmiye doorashada wuxu doonayaa inu na boobo” iyaga oo runta og laakiin dan kale ka leh. Waxay ogyihiin in goob kasta oo laga codaynayo dadka codkooda ka dhiibanayaa ay yihiin dad tiradooda ay og yihiin, liiska magaacyadoodana ay haystaan, isla markaana qof waliba uu wato aqoonsigiisii oo ah Kaadhkiisii cod bixinta. Goobta codbixinta waxa jooga Gudoomiyhii Komishanka ee goobta tiryihii, hubiyiihii muraaqibiintii sedexda xisbi qaran oo mid uu yahay Kulmiye oo ah xisbulxaakimka labana ay yihiin mucaaridka, isla markaana waxa nabadgelyada goobta jooga askar ka tirsan cidamada Somaliland oo Komishanka la shaqaynaya ee aan xisbi gaar ah u shaqaynayn. Waxa intaa dheer oo indhaha ku haya sida ay hawsha codbixinta u socoto goobjoogayaal gudaha iyo dibaddaba (caalami) ah.
Hadaba Kulmiye waxa goobta u joogaa waa hal muraaqib laba muraaqibna waxay u joogaan xisbiyada mucaaridka a markaa cidda ay leeyihiin wax bay boobaysaa ma muraaqibka Kulmiyaa? Mise Komishanka ayaanay kalsooni ku qabin inu dhex yahay? Dhinaca kale gari Allay taqaan doorashadii la isu badheedhay ee ku shubashada iyo ka shubashada ahayd miyaanay ahayn tii bilaa diiwaangelinta lagu galay ee WADDANI uu ku soo baxay ee maanta xisbiga ku yahay? Yaase ka masuul ahaa wixii dhacay een ahayn WADDANI iyo Wasiirkii Hore ee Madaxtooyada ee awoodaha badnaa oo markaaba ay is wateen Gudoomiyihii hore ee Wakiilada maanta labadooduba isku xisbi ah oo labada ugu sareeya Waddani ah (Gudoomiye musharaxna ah iyo hogaamiyaha xisbiga).
Waxa la yidhi “layligu biyaha kashiisa ku jira ayuu ka didaa” waxay og yihiin wixii ay sameeyeen dadkana sidooda ayay moodayaan inay yihiin oon dal iyo dad aan midna loo tudhayn. Waxa taa u dheer waxay og yihiin oo ay hubaan in doorashada lagaga adkaanayo waana taa ka rasmiga ah oo waxay u sii qiil samaysanayaan jabkooda laakiin way ogyihiin in aan cidina boobayn. Waa yaab eh horta ka wax haysta iyo ka aan waxba haysan kee baa u baahan inu wax boobo? Waddani maxaa laga boobi uu haystaaba sawtan Somaliland bari ilaa galbeed si u wada aragta ee laga soo wada taagan yahay loona arko in aanu ahayn xisbi qaangaadh ah oo lagu aamini karo masiirka Somalland markii uu noqday qalwo bahalo-galeen ah ee intii isbedekaba laga samaysanayay xumaantoodu ay iyagi isbedeldoonka sheeganayaa dadkuna ay runta ogyihiin dhegahana ka xidheen. Bal u fiirsada dadka ku ururay waddani iyo kuwa isugu tegay ee maalin walba ku biiraya Kulmiye oo miyay yihiin laba shacbiga Somaliland ay simi karaan ilayn way arkaan waanay kala yaqaanaan eh?
Fariinta aan shacbiga Somaliland anigu halkan uga dirayaa waxay tahay ” awr hayin ah adigoo haysta miyaa la rarta qaalin layli ah oo guradiisa dhalaan lagu aaminaa amaa afar dhoomood inta lagu tiiriyo la dhaansadaa? Waa maya hadii aan dani ku badin awrka gurgur baa hayin gibil-ma-daashe ah. Kulmiye iyo Waddani sidaas ayay kala yihiine yaan la idin hodin”